के तपाईले बिहान खालीपेटमा तातोपानी पिउने गर्नुभएको छ? नछुटाई पढ्नुहोस – Jagaran Nepal
के तपाईले बिहान खालीपेटमा तातोपानी पिउने गर्नुभएको छ? नछुटाई पढ्नुहोस
कुनैपनि स्वास्थ्य समस्यामा डाक्टरहरुले पर्याप्त पानी पिउन सल्लाह दिन्छन्।
दिनमा कम्तिमा पनि १० गिलास पानी पिउनुपर्छ स्वास्थ्यका लागि। पानीको पर्याप्त सेवनले पाचन प्रणाली, छाला तथा कपाललाई पनि स्वस्थ बनाउँदछ।पानीले शरीरका विकारजन्य पदार्थलाई बाहिर ल्याउन सहयोग गर्दछ।
पानीविना जिवनको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। पानी जिवनका लागि अनिवार्य मात्र छैन, पर्याप्त पानी पिउनु सुस्वास्थ्यका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ।अझ मनतातो पानीको सेवन स्वास्थ्यका लागि झनै फाइदाजनक हुन्छ। बिहान खाली पेटमा एक गिलास मनतातो पानी पिउनुका फाइदा यी हुन् ।
यदि छालामा चाउरीपना तथा दागधब्बा आएका छन् भने हरेक दिन बिहान खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनुहोस्। चियाकफीको साटो ग्रीन टी पिउनुहोस् । यसले छाला चम्किलो बनाउने र सरीरको वजन कम गर्न पनि सहयोग गर्दछ।बिहान खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनाले कब्जियतबाट छुटकारा पाइन्छ । पर्याप्त पानी पिउनाले जोर्नीको दुखाई पनि कम हुन्छ र हड्डी मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ ।
बिहान वा खानापछि हरेक पटक एक गिलास तातो पानीमा कागती वा मह मिसाएर पिउने गर्नुहोस्। यसले तपाईंको मोटोपना नियन्त्रणमा अवश्यपनि सघाउ पूर्‍याउनेछ। कागतीमा हुने पेक्टिन पाईबरले भोक कम गर्छ।यदि तपाइँलाई निकै थकाइ लाग्ने समस्या छ भने बिहान मनतातो पानी पिउने बानी बसाल्नुस् । यसले तपाइँको दिनमा ताजगी भर्दछ । मांशपेशीलाई तन्दुरुस्त बनाउन यसले सहयोग गर्दछ ।
दिनहुँ बिहान मनतातो पानी पिउनाले सरीरमा रक्तसंचार सन्तुलित र नियमित हुन्छ । पानी पिउनाले एसिडिटीको समस्या पनि कम हुन्छ र पेट सफा हुन्छ ।जब तपाई कुनै तातो चिज खानुहुन्छ वा पिउनुहुन्छ शरीरबाट पसिना निस्कन थाल्छ। शरीरको तापक्रम बढ्दा पसिना निस्कन्छ, पसिना निस्केपछि तापक्रम घट्छ र शितल हुन्छ। पसिनाले शरीरमा बढि भएको नुन बाहिर निकाल्छ र रगतको शुद्धिकरणमा सहयोग पूर्‍याउँछ।
तातो पानीले शरीरको शुद्धिकरण गर्छ। उमालेको पानी आफैमा शुद्ध त हुन्छ नै। यसले शरीको पाचन प्रणालीलाई पनि नियमित गर्छ। यदि तपाईंको पाचन प्रणालीमा गढबडी छ भने दिनको दुई पटक तातो पानी पिउनुहोस्।यदि तपाइँलाई भोक नलाग्ने समस्या छ भने एक गिलास मनतातो पानीमा एउटा कागतीको रस, मरिच र नुन हालेर पिउनुहोस् ।
रुघाखोकी लागेको बेला पर्याप्त मात्रामा मनतातो वा तातो पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ । तर धेरै चिसो पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनसक्दछ ।बिहान खाली पेटमा मनतातो पानीमा कागती निचोरेर पिउनाले सरीरका विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छन् र सरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बढ्दछ ।दुषित पानी पिउनाले पेट सम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्दछ । तर यदि पानीलाई उमालेर त्यसलाई सेलाउँदै मनतातो बनाएर पिउनाले झाडापखाला, आउँ जस्ता अनेक रोगबाट बँचिन्छ ।